Kuchenesa, Kuchinjana uye Kudzoka - ASFO Chitoro
(Inoshanda chete pazvinhu zvinotenga zvakagadzirwa online shopu)
Orders iyo kubhadhara kwayo isina kuitwa zvinobudirira kuchamiswa mushure memazuva maviri ebhizinesi.
Kuti uderedze yako Order, unogona kutibata nesu kuburikidza neVatengi Rutsigiro Sevhisi kana email ne contact@asfo.store. Tiudzei nezve chinangwa chenyu, muchiratidza marongero, invoice uye nhamba yekutengesa, zvigadzirwa kuti zvidzoke uye zvikonzero nazvo.
Kanzura kuraira kunokwanisika panguva yekugadzirira gadziriso uye usati watumidzira, uye inogona kukumbirwa nemutengi kana iyo Pharmacy kuitira kana paine shanduko dzakaitwa kumamiriro ezvinhu akataurwa mumhepo yekuraira kwepamhepo. Muchiitiko chekuti iwe uchinge watove kubhadhariswa kweutengo wekutenga, izvi zvinodzoserwa kumutengi kuburikidza nenzira imwechete yekubhadhara. Kana iwe uchinge warasa yako, chinzvimbo chekuraira chinoshandurwa kuva "Yakadzimwa".
Kuchinjana kana Kudzoka
Kana paine chero chikonzero, iyo marongero isingaite zvaunotarisira, unogona kuidzosera. Mune ino kesi, iwe uchave nemazuva gumi nemashanu yekutitumira zvigadzirwa zvako zvekudzoka.
Chero kudzoka / kuchinjana kwezvinhu kunofanira kutevera mamiriro anotevera:
Kudzosera zvinhu kunofanirwa kunge kuri mumamiriro akanaka (mamiriro ekutengesa), neye yepakutanga isina kukwiridzirwa pakeji, isina kumboedzwa uye kuperekedzwa neinvoice yayo. Kana iyo pepa ikakanganisika uye zvinhu zvacho zvichiratidza chero zviratidzo zvakajeka zvekushandisa, hatigone kubvuma kuchinjana kwayo kana kudzosa kukosha kwayo.
Zvese zvigadzirwa zvinofanirwa kuperekedzwa nechero risiti yekutenga.
Kana iwe uchida kuchinjana kana kudzosera chero chipi zvacho chako zvinhu, iwe unogona zvakare kuzviita zvakananga kumafamisi chero bedzi iwe uchitora iyo invoice newe.
Kana iwe uchida, iwe unogona kubata yedu Mutengi Rutsigiro Sevhisi kuburikidza neemail kusangana, uchitizivisa isu nezve chinangwa chako chekuchinjana kana kudzoka, zvichiratidza kurongeka, invoice uye nhamba yekutengesa, zvigadzirwa kuti zvidzoke uye zvikonzero nei. Mushure mekusangana uku, iwe uchapihwa mirairo yekuenderera mberi kuchinjana kana kudzoka maitiro. Chero zvazviri, iwe unofanira kutumira chero zvinhu pasina kubatirana yapfuura, sezvo zvisingazoongororwe pakuchinjana kana kudzoka.
Mushure mekusangana neVatengi vedu Yekutsigira Service uye kupihwa iwo wekutsinhana kana kudzoka mirairo, iwe unofanirwa kutumira chinhu chako kunyatso kurongedzwa uye zvinoenderana nemamiriro ataurwa pamusoro, kukero yedu:
Centro Comfort MaiaShopping, lojas 135 e 136
Isu hatigamuchire kudzoka kwezvakagadzirwa zvinotevera: Mishonga, chikafu (inosanganisira chero mhando yemukaka, chikafu chevacheche, mbiya dzevana zvekudya, nezvimwewo), aorthopaedic zvinhu zvine chaiwo matanho, kudzvinyirira masokisi, chero chero chinhu chakagadziridzwa uye zvimwe zvakanyorwa seizvi pamusoro pekutenga chero vevashandi vemufesi.
Kana ukasarudza kuchinjanisa chigadzirwa, tinokuzivisa iwe kuti:
Mari yekuposita kune kero yedu inobhadharwa kune mutengi, kunze kwevatengi vakakuvara neyekufambisa kwezvigadzirwa kana matambudziko ehunyanzvi. Mune zviitiko izvi, mari yekutumira ichavimbiswa naSousa Torres SA Pharmacy. Iko kuchinjana kuchaitwa chete mushure mekusimbisa chimiro chechigadzirwa uye kutevedzera mamiriro akambotaurwa.
Kana ukasarudza kudzosa kukosha kwakabhadharwa, tinokuzivisa iwe kuti:
Mari yekuposita kune kero yedu inobhadharwa kune mutengi, kunze kwevatengi vakakuvara neyekufambisa kwezvigadzirwa kana matambudziko ehunyanzvi. Mune zviitiko izvi, mari yekutumira ichavimbiswa naSousa Torres SA Pharmacy. Kudzorera kubatanidza kunosanganisira iyo yakakwana reti kukosha (zvigadzirwa uye mari yepositi), kunze kwekunge sevhisi yedu isina chikwereti nechikonzero chekudzoka kwakadai - mune idzi zviitiko, mari yekutumira inozobviswa kubva kuhuwandu hwekudzosera kukosha. Iko kuchinjana kuchaitwa chete mushure mekusimbisa chimiro chechigadzirwa uye kutevedzera mamiriro akambotaurwa.
Chii chekuita kana uchinge wagashira yakakuvadzwa package kana chinhu?
Muchiitiko chekuti kutumira kwepasuru kuchinge kwakanganisika, iwe unofanirwa kuratidza zvirimo panguva yekuzvitakura uye nekukurumidza uzivisa mutakuri, uchisangana neVatengi Tsigiro Yedu Service mushure.
Iwe unofanirwawo kubata yedu Mutengi Rutsigiro Sevhisi kana iwe wagamuchira phuku mumamiriro akakwana, asi nezvinhu zvakakanganisika mukati.